Webinar: COVID-19 na Retail - Atụmatụ a ga - eme iji bulie Azụmaahịa Gị Cloud Cloud | Martech Zone
Obi abụọ adịghị ya na ọrịa COVID-19 gbariri ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa. Dịka ndị ahịa Cloud Cloud, agbanyeghị, ị nwere ohere nke ndị asọmpi gị anaghị eme. Ọrịa ahụ agbatịwo nnabata dijitalụ na omume ndị ahụ ga-aga n'ihu na-eto ka akụnụba na-agbake. N'ime webinar a, anyị ga-enye usoro atọrọ atọ na atụmatụ iri na abụọ gafee ha nke nzukọ gị kwesịrị ibute ụzọ taa - ọ bụghị naanị ịlanarị nsogbu a kama ịba ụba na afọ na-abịanụ.
Na Salesforce na Ahịa Cloud's nke nyiwe na ngwa ngwa di iche-iche ma dikwa nke oma, ndi ahia ha nwere ikike kacha mma ihu igwe ojoo a. Highbridge dijitalụ mgbanwe mgbanwe (na Martech Zoneonye guzobere ya Douglas Karr ga - enyere gị aka itolite ịzụ ahịa dijitalụ gị ma gbanwee ojiji nke igwe ojii gị iji nweta ahịa, wulite ọnụ ahịa ndị ahịa, ma jigide ndị ahịa bara uru.
Na webinar a, anyị ga-enye usoro atụmatụ 12 ga - enyere gị aka belata ọnụ ahịa gị na nnweta na ntụgharị, mee ka ego gị na-enweta site na itinye aka, ma bulie mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa dijitalụ. Tinyere webinar anyị, anyị ga-enye ndị bịara ebe ahụ ihe ndebanye na akụnụba ndị ga-eso gị n'ụzọ.
data - atumatu iji hichaa, megharia, mezie ma bulie data gi n'ime Cloud Cloud iji belata ihe mkpofu ma nwekwuo ike.
nnyefe - atumatu iji chepụta ma nyefee ozi na igbe mbata, na-ezere nzacha ihe ma chọpụta nsogbu ISP akọwapụtara.
Hazie - atumatu nkewa uzo gi na ndi ahia gi, nza na ichoputa mkpọsa gi, ma hazie nkwukọrịta.
ule - atumatu iji tụọ, nwalee, ma bulie nkwukọrịta mgbasa ozi gị ọtụtụ ọwa.
ọgụgụ isi - Ghọta otu Einstein siri enyere ndị na-ere ahịa aka ịchọpụta, bu amụma, kwado, ma mekwaa nkwukọrịta ahịa ha.
Highbridge nwere oche ole na ole fọdụrụ na mpụga nke ndị ahịa ha - yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko debanye aha ozugbo:
Ònye kwesịrị ịga:
Ndị na-ere ahịa nwere mmasi ịghọta etu Cloud Cloud nwere ike isi nweta ego maka azụmaahịa gị ma ọ bụ nzukọ e-commerce.
Ndị na-ere ahịa bụ ndị mejuputara Cloud Cloud mana ha ga-achọ ịmatakwu nkewa na nkewa ha na njikarịcha ha.
Ndị na-ere ahịa bụ ndị mejuputara Ahịa igwe ojii mana ha ga-achọ itinye mgbakwunye ọkaibe nke ndị ahịa na nnwale na mbọ ha.
Ndị ahịa ndị mejuputara njem ndị ahịa ma chọọ itinye ọgụgụ isi iji bulie njem ndị ahụ.
Ndi ndu otu na Highbridge nwere ihe karịrị 40 mkpokọta afọ nke onye isi ọrụ na-eduga na ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Ndị ahịa ha kachasị dị ka Dell, Chase Paymentech na GoDaddy… mana ha enyerela ọtụtụ narị otu ụlọ aka ka hazie ụzọ iji gbanwee usoro ha. Na mpụga, ha na-enyere ụlọ ọrụ aka ịgbanwe ahụmịhe ndị ahịa. N'ime, ha na-enyere ụlọ ọrụ aka ịhazi, jikọta, ma bulie nyiwe ha iji mepụta ezigbo oge, ogo 360 maka ndị ahịa ha.
Tags: einsteinndị ahịaWebinar
Showpad: Ọdịnaya Ahịa, Ọzụzụ, Njikọ Aka na Nnwale